RNDP အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးမှ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင် အခွင့် အရေး ကာကွယ် မည်ဟုပြော | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မြန်မာမူဆလင်သည် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ
Anger at Suu Kyi »
Debating Democratisation in Myanmar/Burma ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ အကြောင်း၊ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာနှင့် လူမျိုးစု များဆိုင်ရာ တင်ပြဆွေးနွေး မှုများတွင် ဒုတိယ မြောက်နေ့ဖြစ်သည့် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့၌ ရခိုင် လူမျိုးရေး အစွန်းရောက် ပါတီ တစ်ခု ဖြစ်သည့် RNDP မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ဦးဦး လှစော မှ ရခိုင်ပြည် သည် တောတောင်ရေမြေ သယံဇာတ ကြွယ်ဝပြီး မြန်မာနှင့်မဆိုင် သီးခြား သမိုင်းရှိ ခဲ့သော တိုင်းပြည် တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် ရခိုင် လူမျိုးများ အနေဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် တစ်ခုမျှ မရှိဘဲ ဗဟို အစိုးရ မှသာ အာဏာကို ချုပ် ကိုင်ထားကြောင်း၊ ဗဟို အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့် စကားများ ကို ပြောကြား ခဲ့ပြီး၊ ရခိုင် ပြည်၌ ရှေးယခင်က သေးငယ်သော မွတ်ဆလင် ကွန်မြူနီတီသာ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဗြိတိသျှခေတ် အတွင်း ဘင်္ဂလီ များဝင်ရောက် လာပြီး လူဦးရေ များပြား သွားကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး မှ “ရိုဟင်ဂျာ” ဆို တဲ့ စကားလုံး ပေါ်ပေါက် လာကြောင်း၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောဆိုသည့် ထိုဘင်္ဂလီ တို့ အား တတိ ယနိုင်ငံသို့ ပို့ပစ်မည်ကို ရခိုင် တစ်မျိုးသားလုံး သဘောတူကြောင်း၊ အစ ပိုင်းတွင် ပြော ဆိုခဲ့သည်။
ဦးဦးလှစော ပြောဆိုပြီးနောက် အခမ်းအနားမှူးမှ အမေရိကားမှ ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော် ဦးဌေး လွင်ဦး အား အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် သုံးမိနစ်ခန့် စကားပြောခွင့်ပေးခဲ့၍ ဦးဌေးလွင်ဦးမှ ရိုဟင်ဂျာ ဟူသည် ရခိုင်နယ်၏ မူလဇာတိ လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ ကျောက်စာ အထောက်အထား၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ် မတိုင်မှီ အထောက်အထား၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ဆန်းပိုင်း ၁၈၂၆ ခု သန်းခေါင် စာရင်း အထောက် အထားများဖြင့် တင်ပြ ခဲ့ပြီး၊ ရခိုင်အား အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်စတွင် ရိုဟင်ဂျာမှာ ရခိုင်ပြည် လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ စာရင်းရှိခဲ့ပြီး၊ ခင်ဗျား တို့ကိုယ်တိုင်က မွေးနှုန်း ကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ ဒီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဒီနေ့ ရခိုင်ပြည်မှာ လူဦးရေတိုးနှုန်း စာရင်းမှပင် ပျောက်နေကြောင်း၊ ရခိုင်ဟူသည်မှာ ဗမာလူမျိုးသာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာမှ ခွဲထွက်ခွင့်သော် လည်းကောင်း၊ မြန်မာထက် ထူးခြား၍ ပိုမိုသည့် အခွင့်အရေးသော်လည်းကောင်း တောင်း ဆိုခွင့်မရှိသော လူမျိုးဖြစ်၍ မိမိသည်လည်း ရခိုင် လူမျိုးဖြစ်၍ ဗမာနှင့် အတူ တူဖြစ်ကြောင်း၊ရခိုင် အမျိုး သားရေး ခေါင်းဆောင်များ မှာ ဗဟုသုတ မလုံလောက်ဘဲ လူထုအား သတင်းမှား၊ ဗဟုသုတ အမှားများ ကိုသာ ပေးနေကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သော သီတင်းပတ်က ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ရခိုင် သမိုင်း ပညာရှင် ဆိုသူနှင့် “ရိုဟင်ဂျာ” ကိစ္စကို ဆွေးနွေးစဉ် ၎င်းမှ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့် အမည်နာမအား အတင်း ခံ ငြင်း ပြီး၊ နောက်ဆုံး စာ အုပ်ထောင်ပြသောအခါ၊ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့် အမည်အား မငြင်းနိုင်တော့ ဘဲ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည်မှာ ရခိုင် လူမျိုးကို ခေါ်သည်ဟု ထိုပညာရှင်က စကားလှည့်ခဲ့ ကြောင်း၊ ဒါဆို အဲ့ဒီ ပညာ ရှင်ကို ခင်ဗျားက မွတ်ဆလင် ဖြစ်သလားလို့ မေးခဲ့စဉ် သူ့ဘက်က စကားပိတ်သွား ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုလည်း မိမိပြောဆိုသည့် အထောက်အထားတို့အား တက်ရောက်လာသည့် ပရိသတ်မှ တစ်ယောက် ချင်းစီအား မိတ္တူ များ ဝေပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရသည့် အချိန်တို အတွင်း ဆက်တိုက် တင်ပြခဲ့ပြီး ထိုအထောက် အထား တို့အား ပရိသတ် အတွင်း ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံ ခြားမှ စီးပွားရေး စိတ်ဝင်စားသူများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားရေး တိုးတက်စေရန် အကူအညီ ပေးပါရန် မိမိ အနေဖြင့်လည်း မေတ္တာရပ် ခံကြောင်း၊ တစ်ပြိုင် နက်ထဲမှာ မြန်မာခေါင်းဆောင်များကိုလည်း အမှန် တရား ကို လျှောက် လှမ်းဘို့ process ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ အချိန်ယူရမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မိမိက လက် ခံနိုင် ကြောင်း၊ သို့သော် အဲ့ဒီ အမှန်တရားကို မလျှောက်လှမ်းမှီ- အမှန်တရားကို ချက်ချင်း လက်ငင်း လက်ခံရဲတဲ့ သတ္တိလိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဦးဌေးလွင်ဦး စကားပြောပြီးနောက် အမေးအဖြေကဏ္ဍတွင် ဦးဦးလှစောမှာ ဘင်္ဂလီ ဆိုသည့် စကားလုံး တစ် လုံးမှ မပြောတော့ဘဲ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင် ဆိုသည့် ဝေါဟာရကိုသာ သုံးစွဲပြောဆိုသွားပြီး လက် ရှိ ဖြစ်ခဲ့သမျှကိစ္စများမှာ အလွန် ရှုပ်ထွေး နက်နဲကြောင်း၊ မိမိတို့မှာ အာဏာမရှိ၍ ထိုကိစ္စမှာ အာဏာ ရှိ သူ များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့်မူ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင် အပါအ၀င် မည်သူ့ကိုမဆို ဖိနှိပ်နေသည်ကို မနှစ်သက်ကြောင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် သည့် မြန်မာနိုင်ငံ သား များနှင့် နိုင် ငံခြား သား များ ရှေ့မှောက်၌ ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုသွားပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် သူ ၁၅၀ ခန့် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Tags: Asia, Australia, Australia National University, Australian National University, Burma, Myanmar, Politics
This entry was posted on March 16, 2013 at 1:08 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “RNDP အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးမှ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင် အခွင့် အရေး ကာကွယ် မည်ဟုပြော”
March 17, 2013 at 6:02 am | Reply
I am really proud of you regarding that conference ko pautsa. Insha Allah we had achive our goal. At least we have to continue our journey up to end.